AYA Bank – Your Trusted Partner
EXCHANGE RATE 07th Jul 2022
( 10:37AM ) BUY 1850 BUY 1892 BUY 1317
SELL 1857 SELL 1901 SELL 1324
Mask Distribution to Public by AYA Bank
As part of our Corporate Social Responsibility (CSR) activities, ‘WearaMask Campaign’ was organized on 28th January 2022 at AYA Bank’s Head Office in Kyauktadar Township, and near Sule Pagoda in support of COVID-19 protection measures, especially whenanew subtype of the Omicron Coronavirus variant is spreading. With the[…]
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသည် ရွှေပြည်သာ၊ ထောက်ကြန့်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ တာမွေ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ဗဟန်းနှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်များရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများဖြစ်သည့် ဦးဖိုးမောင်ကျောင်း(ဗားကရာကျောင်းတိုက်)၊ စိတ္တသုခကျောင်း (သရက်တောကျောင်းတိုက်)၊ ဒေဝကုဏ္ဏဒီ ကျောင်းတိုက်၊ ဓမ္မသုခကျောင်းတိုက်၊ ဓမ္မဇေယျကျောင်းတိုက်၊ ပါသိကျောင်းတိုက်၊ မြရာကုန်းကျောင်းတိုက်၊ စလင်းကျောင်းတိုက်၊ ဘုံပျံကျောင်း (တိုင်တရာ ကျောင်းတိုက်)၊ မင်းကွန်းဓမ္မရောင်ခြည် ကျောင်းတိုက်၊ သုဝဏ္ဏသိင်္ဂီ ကျောင်းတိုက်၊ ညောင်တုန်းကြီးကျောင်းတိုက်၊ မဂ်လာရာမ ကျောင်းတိုက်၊ ပညာဒီပကျောင်းတိုက်၊ အောင်ဇေယျံကျောင်းတိုက်၊ မဏိရတနာ ကျောင်းတိုက် (ဥယာဉ်တိုက်)၊ အောင်မဂ်လာကျောင်းတိုက်နှင့် ဖားအောက် တောရ အစရှိသည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁၈) ကျောင်းသို့ ဆွမ်းဆန်အိတ်များနှင့် Surgical Mask များကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နှင့် ၂၅ ရက်က သွားရောက်[…]
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များကို Covid-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးမည့် ရန်ကုန် – ပြည်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်(၄၃/၆)ရှိ Covid-19 ရောဂါစစ်ဆေးရေးစခန်း (တိုက်ကြီး)ကို ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ရာ ကုန်ကျစရိတ်ကို Max Highway Co., Ltd. က ကျခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ အောက်တိုဘာလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည့် (၇၅)ကုတင်ဆံ့ ICU/HDU ဧရာဝတီစင်တာသို့ ဧရာဝတီဘဏ်မှ လိုအပ်သည်များကို ထပ်မံမတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ICU/HDU အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တတ်စွမ်းသမျှ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပြီး ထပ်မံ လိုအပ်ချက်ရှိသော စက်ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါးနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အောက်စီဂျင်စက်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းလျက်ရှိရာ များပြားလှသော ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ ကျပ်သိန်း(၁၀,၀၀၀)၊ မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ ကျပ်သိန်း(၅၀၀၀) ထပ်မံ၍ မတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ICU/HDU ကို ဆရာကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ကြပ်မတ် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာမြစိုးနှင့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများ၊ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း(၁၅၀)ကျော်တို့က စက်ပစ္စည်းကိရိယာ စုံလင်စွာဖြင့် အရေးပေါ်လူနာများကို[…]
On behalf of Ayeyarwady Foundation, Ms. Eaint Hmu Zaw and Mr. Ye Mann Zaw have contributed 10 million MMK and other necessary supplies to Dr. Win Maw Oo, Head of South Okkalapa Hospital for Covid-19 Prevention and Treatment. Ayeyarwady Foundation has constantly contributing all its resources for the people’s safety and public health during[…]
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများသည် အောက်တိုဘာ (၇)ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းက မကြာမီဖွင့်လှစ်မည့် (၇၅)ကုတင်ဆံ့ ICU/HDU ဧရာဝတီ စင်တာသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကာ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ICU/HDU အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တတ်စွမ်းသမျှ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပြီး ထပ်မံ လိုအပ်ချက်သော စက်ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါးနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အောက်စီဂျင်စက်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းလျက်ရှိရာ များပြားလှသော ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ ကျပ်သိန်း(၁၀၀၀၀)၊ မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ ကျပ်သိန်း(၅၀၀၀) ထပ်မံ၍ မတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ICU/HDU ကို ဆရာကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ကြပ်မတ် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာမြစိုးနှင့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများ၊ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ[…]
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွက် ငွေကျပ် (၃၅၈)သိန်းတန်ဖိုးရှိ Covid-19 ကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း Covid-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းက တတိယအကြိမ် လှူဒါန်းမှုအဖြစ် ငွေကျပ် (၃၅၈)သိန်းတန်ဖိုးရှိ Covid-19 ကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင်ထံသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် Medical Recommanded PPE အစုံ (၈၀၀)၊ Volunteer PPE အစုံ (၁၀၀၀)၊ N95 Mask အခုရေ (၁၀၀၀)၊ Mask အခုရေ (၁၅၀၀၀၀)၊ လည်ရှည်ဖိနပ် အရံ(၁၂၀)၊ Hand Sanitizer ဘူး (၇၂၀)နှင့် ကလိုရင်းပိုးသတ်ဆေးရည် (၁၅)ပုံးတို့ကို ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းက အဓိက ပံ့ပိုးကူညီ ဦးဆောင်မှုဖြင့် Covid-19 လူနာများကို လက်ခံကုသပေးမည့် ဧရာဝတီ စင်တာ၏ အဆောက်အဦနှင့် Infrastructure များ၊ ဆေးဝါးများ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများနှင့် အခြား လိုအပ်သည်များအတွက် AYA Bank၊ AYA SOMPO Insurance နှင့် မက်စ်မြန်မာ အုပ်စုမှ ငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀၀) မတည် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။